Naxdin iyo murug, duqii Magaalada Muqdishu oo dhaawicii argagixada u geeriday | Warbaahinta Gobollada Sool Sanaag Cayn
Dadka reer Muqdishu yaa u murugoonay geerida ku timid Allah ha u naxariistee Cabdiraxman Cumar Cusman oo ah guddoomiyaha gobolka Benaadir isla markaana ahaa duqa magaalo-madaxda Soomaaliya Muqdishu oo bisha Luuliyo 24 ku geeriyooday dalka Qatar ka dib dhaawac halis ah oo ka soo gaaray qaraxii argagixadu galaafteen lix qof oo kale oo u badan maamulkii gobolka Banaadir.
Isagoo aan dhaqaaq ku jirin ilmana ka degayso dhabannadiisa Adan Cusmaan oo 21 jira wuxuu yiri: “argagixisada dishay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxay na geliyeen murug iyo oohin, laakii niyadda nagama jebin karaan. Adan isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri, “Dadka reer Muqdisho waxay waayeen nin culus iyo hoggaamiye weyn.”
Cabdiraxman Cumar Cusmaan wuxuu dalka ka tegey 1990-dii isagoo qaxooti ku galay dalka Ingiriiska. 17 sano ka dib ayuu dalka dib ugu soo laabtay, xilal kala geddisanna ka soo qabtay Soomaaliya. Waxaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdishu loo magacaabay sannadkii 2018kii horraantiisa. Guddoomiye Yariiso waxaa lagu aasi doonaa Muqdishu bisha August 3 deeda.